Waxqabadka Suuqgeynta ee Hoos u dhaca Coronavirus | BehMaster
Bogga ugu weyn/E-commerce/Waxqabadka Suuqgeynta ee Hoos u dhaca Coronavirus
Waxqabadka Suuqgeynta ee Hoos u dhaca Coronavirus
Xitaa marka laga hadlayo cudurka faafa ee coronavirus, ganacsatada ecommerce waa inay wanaajiyaan ololayaasha xayeysiinta. Taas waxaa ka mid ah suuq-geynta waxqabadka, taas oo ah xayeysiisyada khadka tooska ah ee ku kacaya xayaysiiyaha kaliya marka macaamilka suurtagalka ah uu qaado xoogaa tallaabo ah, sida gujinta xayeysiiska lacag-guji-guji ama bilaabida wada-sheekeysiga Facebook Messenger.
Marka la eego xidhitaannada bakhaarka iyo fogeynta bulshada ee ka dhalatay masiibada, waxaa jira ugu yaraan afar tillaabo oo suuqle ecommerce uu qaadi karo si uu u horumariyo natiijooyinka suuqgeynta muddada dhow.
Dib u eegista fariimaha
Samee liiska dhammaan fariimaha suuq-geynta ee hadda jira. Ka saar xayaysiisyada suurtagalka ah ee weerarrada leh, dareen la'aanta ah, ama aan la xiriirin ee la siiyo coronavirus.
Joe Yakuel, oo ah aasaasaha iyo maamulaha shirkadda WITHIN, oo ah shirkad wax qabad oo fadhigeedu yahay New York, ayaa sidan u dhigay, "Waxaad u baahan tahay inaad dib u eegto qayb kasta oo dammaanad ah oo suuqgeyn ah sababtoo ah wax kasta oo ay tahay haddii ay tahay wax laga yaabo inay la kulmaan sida tone-dheaf" waxaad u baahan tahay inaad cusboonaysiiso.
"Waxaa laga yaabaa inaad xayaysiis kula yeelato dadka arooska oo aad iibinayso suudh, iyo sida hadda taasi waa dhego la'aan. Ma jiro qof jooga aroos, sax? Waxaa laga yaabaa inaad haysato xayaysiis [muujinaya] qoys fadhiya makhaayad. Caadi ahaan, maaha cod-dhego. Hadda, cod-dhego. Yaa fadhiya makhaayad?
"Marka, waxaan u maleynayaa, hadda ka hor intaadan waxba samayn, waxaad u baahan tahay inaad wax walba eegto oo aad tidhaahdo, 'Sug daqiiqad... tani weli ma ku habboon tahay mise maaha?' oo jiid wax kasta oo aan ahayn.”
Ku beddel nuqul xayeysiis ah "dhago-dhegoole", nuqul ka mid ah bogga soo degaya, iyo muuqaallada nuxur cusub oo gudbinaya dareen dhab ah. Farriintaadu waa inay macno u yeelataa macnaha guud ee ganacsigaaga, sumaddiisa, iyo masiibada.
Xaqiiji inaad furantahay
Dukaamada bulukeeti-iyo-hoobiye ma aha meheradaha kaliya ee xidhma iyadoo dadku isku dayayaan inay yareeyaan coronavirus. Bakhaaro badan oo online ah ayaa sidoo kale si ku meel gaar ah u xiran.
Tusaale ahaan, sirta L Brand's Victoria waxay si ku meel gaar ah u xidhay dhammaan bakhaarradeeda jireed waxayna joojisay shixnad ganacsiyeedka. Sirta Fiktooriya waxay soo dhejisay ogaysiis shabakadeeda taasoo ogeysiinaysa booqdayaasha inaysan aqbalin amarada. Iibiye kasta oo internetka ah ma ahayn mid ixtiraam leh. Mararka qaarkood dukaameystaha ayaa tagi doona goobta hubinta ka hor inta aysan ogaanin in dukaanku aanu shaqaynayn.
Bogga internetka ee sirta ah ee Victoria wuxuu sharxayaa in hawlaheedii ganacsiga jireed iyo eganacsi si ku meel gaar ah loo xiray coronavirus-ka dartiis.
Haddii meheraddaadu ay wali ku iibinayso khadka oo ay wali nafteeda ku xayaysiinayso suuqgeynta waxqabadka, waxaad u baahan tahay inaad ogeysiiso dukaameeysatada.
Tusaale ahaan waa Michael's, tafaariiqda farsamada gacanta. Shirkaddu waxay ku horumarinaysaa Michaels.com adeegyadeeda wax-ka-iibsiga-online ah, adeegyada dhinac-qaadista. Soo booqdayaashu waxay si cad u fahmeen in Michael uu doonayo inuu ganacsi sameeyo.
Qofka booqda bogga Michael wuxuu ogaan doonaa in shirkadu shaqaynayso.
Goobta ecommerce-ka ee shirkaddaada iyo boggaga soo degista suuq-geynta suuqgeynta waa, si la mid ah, inay caddeeyaan inaad furan tahay.
Iska yaree Xubinta Iibka
Ganacsatada iibinaya agabka muhiimka ah sida cuntada iyo walxaha cabitaanka, daawooyinka, alaabta guriga, iyo kuwa la midka ah ayaa ku raaxaystay sare u kaca dakhliga iibka inta lagu jiro cudurka faafa.
Marka loo eego xogta macaamiisha WITHIN - taas oo ka dhigan ilaa $500 milyan kharashaadka waxqabadka iyo ku dhawaad ​​$5 bilyan oo dakhli - tafaariiqda iibiya alaabooyinka "muhiimka ah" waxay arkeen dakhligoo kor u kacay ilaa 221 boqolkiiba illaa Maarso 19.
Xogta GUDAHA waxaa ku jira waxqabadka sanadka oo dhan, taasoo la macno ah, "Haddii waaxdu ay kor u kacday 10 boqolkiiba YoY kahor COVID-19, oo waaxdu ay hadda hoos u dhacday 15 boqolkiiba YoY, waxaan soo sheegi lahayn in boqolkiiba 25 hoos loo dhigo marka loo eego xilliga bartilmaameedka. ”
Markaa, haddii dakhliga tafaariiqle ee qaybta muhiimka ah uu hore u kacay, dhammaan kobaca waxa laga yaabaa inaanay sabab u ahayn fayraska. Si kastaba ha ahaatee, masiibada ayaa kicisay baahida loo qabo alaabtan.
Dhammaan kobaca dakhliga ee tafaariiqle "muhiimka ah" waxaa laga yaabaa inaysan sabab u ahayn fayraska. Si kastaba ha ahaatee, masiibada ayaa kicisay baahida loo qabo alaabooyinkaas. Xigasho: GUDAHA.
Qaybaha oo dhan ma wada kordhin, si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay GUDAHA. Tafaariiqlayaasha Omnichannel iyo ganacsatada saafiga ah ee ecommerce-ka qaybta moodada waxay arkeen dakhligoo hoos u dhacay ilaa 63 boqolkiiba marka loo eego bartilmaameedka.
Tafaariiqleyaasha moodada ayaa ka mid ahaa kuwa ugu dhibka badnaa ee ku dhaca saldhigga macmiilka ee WITHIN.
Haddii ganacsigaagu ku jiro qaybta muhiimka ah, uma baahnid inaad wax badan samayso si aad u dhiirigeliso iibka. Haddii, si kastaba ha ahaatee, shirkaddaadu ay ku jirto qaabka moodada ama qaybta "aan muhiimka ahayn", ka saar inta ugu badan ee iibka "jajab" intii suurtagal ah.
Gudaha Yakuel wuxuu soo jeediyay in tani ay noqon karto waqtigii la samayn lahaa dalabyo dhoofin bilaash ah oo cusub ama dheeraad ah. Ama, haddii meheraddaadu leedahay bakhaar muuqaal ah, fududayso in la gujiyo oo la ururiyo walxaha geeskeeda.
Marka la soo koobo, ka hor inta aanad maalgelin xayaysiisyada waxqabadka, isku day inaad yarayso khilaafka beddelka.
Markaad diyaarisay xayaysiisyadaada iyo bogga soo degista, ka dhigtay mid cad in dukaankaagu furan yahay, oo aad samaysay soo jeedin hoose ama laba, kor u qaad waxqabadkaaga suuqgeynta.
Iyadoo ku xiran ganacsiga, tan waxaa ka mid noqon kara ilaalinta lacagta caddaanka ah inta lagu jiro xiisadda ama ilaalinta ama kordhinta maalgashiga.
Xataa dhibic jabinta-dalabka koowaad. "Waxaa jira nooc marin ah [kharashka suuq-geynta waxqabadka] halkaasoo ay macno u leedahay qof walba inuu gaaro," ayuu yiri Yakuel. "Markaa wixii ka dambeeya xadkaas, waxay runtii ku xiran tahay qaabkaaga raasumaalka."
Xaddigaas ayaa ah "dalabka koowaad, xitaa dhibicda jebinta," taasoo la macno ah "haddii aad ku bixin karto kordhinta dollarka [ suuq-geynta waxqabadka] oo aad taas u sameyso si faa'iido u leh dalabka koowaad...ma jirto sabab aad u diidi karto' ma qarash gareyn dollarkaas,” ayuu yiri Yacquub.
Ka fakar sidan. Haddii aad kordhin karto miisaaniyada suuqgeynta waxqabadka maalinlaha ah oo aad weli faa'iido ka samayn karto dalabka ugu horreeya ee dukaameeyste kasta, samee. Waa inaad kordhisaa maalgelintaada PPC-da-dalabka-koowaad,-xataa dhibic jabinta.
"Ku bixi inta ugu badan ee suurtogalka ah ee bini'aadamka ilaa inta ugu dambeysa oo ugu yar ee wax-ku-oolnimada dollarka ah ee korodhka ah uu helayo dalabka koowaad ee xitaa," Yakuel ayaa yidhi.
Markaa, markaad horumarisa xayaysiisyadaada, qasab maaha inaad diirada saarto cabbirada sida dhagsiimada ama aragtida. Halkii, diiradda saar faa'iidada iib kasta.
Sida saxda ah loo sameeyo, habkani wuxuu kordhin doonaa socodka lacagta caddaanka ah.
Wixii ka dambeeya xitaa jebinta dalabka koowaad. Ka bacdi barta jabinta dalabka koowaad, go'aan samee. Miyay tahay in shirkaddaadu ay ku maalgeliso suuq-geynta waxqabadka iyada oo wax yar oo degdeg ah ay soo celinayso si ay u dhisto xidhiidhada macaamiisha muddada-dheer?
Haddii meheraddaadu "ay leedahay lacag caddaan ah oo badan, oo aad aaminsan tahay inaad xamili karto duufaantan, markaa waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad lacag ku kharash garayso si aad u hesho macaamiisha ka baxsan dalabka koowaad ee xitaa ..." Yakuel ayaa yidhi.
"Marka, waxaa laga yaabaa inaadan jebin karin xitaa amarka ugu horreeya, laakiin haddii aad filayso in dadku ay bixiyaan saddex dalab sannadkii, oo aad ku kharash garayso wax ka badan faa'iidada dalabka koowaad, laga yaabee inaad gasho faa'iidada labaad, ama dalabka saddexaad ee faa'iidada , waxaad weli ku soo celinaysaa lacagtaada 12 bilood gudahood."
Halkan mar kale, furaha ayaa ah in diiradda la saaro faa'iidada.
Fiidiyowga: Hamlet Batista oo ku saabsan is-milliminta iyo habaynta SEO oo leh kood
Ka gudub, Dropbox: Sida loo wadaago galka iCloud ee iOS 13.4